Ukuthengwa kweVidiyo kaGucci entsha 'Yokuphila'!
ngu admin nge-20-07-20
Ukusebenza kuseti olunikezelweyo eFlorence, kwiziko lenkonzo e-Itali, iGucci Live ijolise ekuvuseleleni amava obuqu bokuthenga ezivenkileni. Ngokuma kweenyawo kwivenkile ukuzabalaza ukubuyela naphina kufutshane namanqanaba angaphambili, iigranti ezinqabileyo kunye nabathengisi bakha iindlela ezintsha zokunxibelelana apho ...
Iofisi yeOlicom kunye nomzi mveliso
Iofisi yeOlicom kunye nomzi mveliso iOlicom yaziwa njengeHakakai Shoes & Gwear Co Ltd kwaye ikwindawo yaseJinjiang idolophu eyintloko yezihlangu iChina. Wamkelekile ukusityelela nangaliphi na ixesha.Ithatha malunga ne-10 yeemitha kwisikhululo seenqwelomoya iJinjiang kunye nemizuzu engama-25 ukusuka kuloliwe waseJinjiang ...
I # 127thCantonFair
I # 127thCantonFair iya kunikezelwa kwimidlalo ye-intanethi kunye nokudala imeko yothethwano ethembekileyo ethembekileyo kwi-Intanethi. Amawaka abathengi kunye nomboniso baya kusebenzisana ngokupheleleyo kwiintsuku ezili-10. Ukuthenga kwaba bathengi kuya kuba lula kwaye kuboniswe ...